Mogadishu Journal » 2018 » September » 9
Ra’iisul Wasaaraha oo maqaal ka qoray is bedelka Geeska Afrika (Dabeysha Is bedel ee Geeska Afrika)
Mjournal :-Maalmo yar ka hor, dowladaha Jabbuuti iyo Erateriya waxa ay ku heshiiyeen in ay xiriirkooda dib u hagaajiyaan, isla-markaasna bog cusub u furaan danaha labada waddan oo uu horay qalqal siyaasadeed soo kala dhexgalay. Arrintaan waxaa xigtay guul kale oo taariikhi ah,...
Ronaldo oo ka niyad jabay guulaha Real Madrid
Wali lama arag xaqiiqada dhabta ah ee Cristiano Ronaldo ugu biiray kooxda ka dhisan magaalada Turin. 33 jirkaan ayaa weli raadineya inuu shabaqa soo taabto tan iyo markii uu ka dhaqaqay kooxda Real Madrid. Ka dib seddex kulan oo Serie A ah, Ronaldo ayaa qaaday weeraro badan,...
Xisbiyadda Siyaasadda oo ka hadlay go’aankii madaxda D/goboleedyadda
Mjournal :-Qaar ka mid ah Xisbiyadda Siyaasadda ee dalka ayaa War ka soo saaray Go’aankii dowlad goboleedyadda ee shalay ka qaateen dowladda Dhexe, kaasoo ahaa in ay hakiyeen xiriirkii dowladda Dhexe. Xisbiyadda Siyaasadda ayaa taageeray Go’aanka Madaxda maamul...
Dacwad laga gudbiyay Taliyaha NISA iyo ku xigeenkiisa
Muqdisho : HN :-aliye ku xigeenkii hore hay’adda NISA ee ciidanka laga saaray daroojinkii Ciidanka laga xayuubiyay ayaa Maxkamad u gudbiyay Dacwad ka dhan ah Taliyaha NISA Xuseen Xasan iyo ku xigeenkiisa Fahad Yaasiin . Cabdalla Cabdalla ayaa ku eedeeyay Mas’uuliyiinta Sare ee...
Qarax loo adeegsaday Gaari gacan oo Muqdisho ka dhacay
Mjournal :-Sidda ay xaqiijiyeen Qaar ka mid ah Shacabka ku sugan Xaafadda Siinay ee Magaalada Muqdisho Qarax ayaa goor dhow halkaasi ka dhacay. Qaraxa ayaa la sheegay in uu ahaa Miinadda nooca dhulka lagu Aaso oo lagu soo hoos qariyay Gaari gacan ka dib lasoo dhigay goob ay ku...
Madaxweyne Mustafe oo dardaaran adag u jeediyay Liyuu boolis
Mjournal :-Madaxweynaha cusub ee dowlad degaanka Soomaalida ayaa ka dalbaday Ciidanka Liyuu Boolis oo dhowr jeer lagu eedeeyay in ay geysteen tacadiyo kala duwan in ay ilaaliyaan Xuquuqda Aadaanaha. Waxaa ugu baaqay ciidammada inay iska ilaaliyaan tallaabo kasto oo xadgudub u...
Gudoomiye Yariisow oo Burburiyay dhisme horay looga guuray (Sawiro)
Mjournal :-Maamulka Gobolka Banaadir ayaa fuliyey qorshaha dib-u- soo celinta dhulka Danta Guud oo Jardiinka Nambar Afar la banneeyey oo dhismihii laga burburiyey si bilicdii Jardiinka loo soo celiyo. Dhismaha Xalay la burburiyay ayaa ahaa dhisme horay ay uga guureen dadkii...